Fob Inani: kuncike nangohlobo
Ubuningi Min.Order: 1.0kgs
Supply Ikhono: 100kgs minium
Phenibut isetshenziswa Russia njengoba ikhambi elenziwa ukwelapha anhlobonhlobo ukugula, ngisho ukukhathazeka, ukucindezeleka, asthenia, ukuqwasha, ukuba umlutha wotshwala, posttraumatic ukucindezeleka disorder, amalimi awahlobene nalokho, neziyaluyalu vestibular ...
HTA kuyinto ekhuthaza phenolic. Hydroxytyrosol base uvame atholakala omnqumo plant.The kwalokho ukwanda acetate hydroxytyrosol njengoba bioavailability. Hydroxytyrosol ingenye kakhulu enamandla impilo yeselula ...
Curcumol kuyinto monomer okumsulwa behlukene Rhizoma Curcumaeis nemisebenzi antitumor. Kuyinto eqeda ukuvuvukala kanye ejenti antiproliferative. Kuvimbela LPS olubangelwa CHA ukukhiqizwa by abacindezela iNOS mRNA inkulumo.
Isoxepac sesiqhubeke Lesisemkhatsini Olopatadine, Olopatadine kuyinto antihistamine (kanye anticholinergic futhi insika cell isimame), wathengiswa abe iconsi kadokotela iso oluqanjwe Alcon kwelinye izimfanelo ezintathu: ...
Ukusebenza nge izinga labortary lwesithathu, NF ...